Shan State Archives - LODGGY
Church, ReligionLeaveaComment on နှစ်(၁၀၀) Church ကျောင်းလို့ လူသိများတဲ့ လေ့လာစရာကလောမြို့ရဲ့နှစ်ဆွေး Church ကျောင်း
July 2, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	Myanmar, Pindaya
တောင်ပေါ်‌ဒေသဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပခရီးသည်များအတွက်ပါ စွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ အရပ်ဒေသပါ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ပင်းတယမြို့နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ပင်းတယဂူကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ Tourist Attraction နေရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ပင်းတယမြို့သည် တောင်ကြီးခရိုင်တွင်ပါဝင်ပြီး ကလောမြို့နယ်၊ ရွာငံမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် (၃)မြို့နယ်အကြားထဲတွင် တည်ရှိသော မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂူတွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပင်းတယဂူသည် ပင်းတယမြို့၏ထုံးကျောက်တောင်းစောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိနေပြီး ထိုတောင်စောင်းပေါ်တွင် တောင်မှမြောက်သို့ဖြစ်ပေါ်နေသော ဂူပေါက်ဝ(၃)ခု ရှိပါသည်။ထိုဂူပေါက်ဝ(၃)ခုမှ တောင်ဘက်အကျဆုံးဂူ‌ပေါက်တစ်ခုသာ ဝင်ရောက်လို့ရနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ ဂူဟာ ပေ ၄၉၀ထိဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ကုန်းဘောင်ခေတ်အစောပိုင်းမှ ယနေ့ခေတ်အထိခေတ်အဆက်ဆက်မှ ထုလုပ်ပူဇော်ကိုးကွယ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပေါင်း (၈၀၀၀) ကျော်အထိရှိပါသည်။ အစောဆုံးဆင်းတုတော်တွေဟာ ကုန်းဘောင်ခေတ်အစောပိုင်း ၁၇၅၀ တွင်ထုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟုခန့်မှန်းကြသဖြင့် ဂူ၏သက်တမ်းနှင့် ဘုရားဆင်းတုတော်တို့ဟာ ကာလရှည်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် များပြားလှပြီး ပုံသဏ္ဌာန်စုံလင်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီတစ်နေရာတည်းမှာသာတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ …
Read the full post →“သင်မသိသေးတဲ့ ပင့်ကူရခေါ် ပင်းတယဂူအကြောင်း ~”
LeaveaComment on သင်မသိသေးတဲ့ ပင့်ကူရခေါ် ပင်းတယဂူအကြောင်း ~
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလော – ရွာငံ – ပင်းတယ နားတဝိုက် Camping လုပ်နိုင်မယ့်နေရာတွေ
June 10, 2020 kyaw kyaw	Myanmar, Shan State
ဒီတစ်ခါတော့ ခရီးတွေသွားတဲ့အခါ Luxury ဆန်ဆန်မဟုတ်ပဲ သဘာဝတရားနဲ့အနီးကပ်ဆုံး ထွေးပွေ့ထားပြီး ဘဝမှာမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် အေးချမ်းလှပတဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလော-ရွာငံ-ပင်းတယ နားတဝိုက်က Campsite တွေအပြင် soft trekking တွေ အခြားထူးခြားတဲ့ Activities လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေစီစဉ်ပေးနေတဲ့ နေရာလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်.. 1.Dream Clover Adventure Trekking and Camping – Ywanganလွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် 2016 ခုနစ်အသက် ၂၄ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ လူငယ်မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဟာ Dream Clover Company ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့အိပ်မက်ကတော့ သဘာဝတရားထဲ နီးကပ်စွာခရီးသွားချင်သလို အခြားသူများကိုလည်း ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ ယန္တယားတစ်ခုကနေ သဘာဝတရားရဲ့ လှပဆန်းကြယ်မှုတွေခံစားပြီး ထွက်ပေါက်ရစေချင်ခဲ့တာပါ။ “ကြယ်တွေအောက်မှာအိပ်မယ် သဘာဝတရားထဲ ခရီးသွားပြီး …
Read the full post →“ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလော – ရွာငံ – ပင်းတယ နားတဝိုက် Camping လုပ်နိုင်မယ့်နေရာတွေ”
LeaveaComment on ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလော – ရွာငံ – ပင်းတယ နားတဝိုက် Camping လုပ်နိုင်မယ့်နေရာတွေ
June 8, 2020 kyaw kyaw	Hotel Promotions, Kalaw, Myanmar
ကလောမြို့လေးက အရမ်းကိုအေးချမ်းလှပတဲ့မြို့လေးဖြစ်သလို ဟိုတယ်လှလှလေးတွေလည်း အရမ်းများပါတယ်။ ကလောမြို့က ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ Inn၊ Hostel လေးတွေက အစ တစ်မျိုးစီတော့ လှနေတာချည်းပါပဲ။
အဲ့ဒီထဲကမှ နည်းနည်း ပိုထူးခြားပြီး လှနေတဲ့ ကလောကဟိုတယ်လေးတွေ ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်ဟိုတယ်တွေ ဘယ်လိုလှလဲဆိုတာကိုတော့ ကြည့်ကြည့်ပါအုံးနော်…
hotelLeaveaComment on ကလောမြို့က အလှဆုံးဟိုတယ်များ
Royal Kalaw Hill Resort or Grey House(Lodggy Hotel Review)
April 1, 2019 cody kg	garden resort, Hotel Reviews, Kalaw, Myanmar, Shan State, Travel Tips
ကလောမြို့က အရင်က လူတွေ ညအိပ် ညနေ လည်ပတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး .. အခုနှစ်ပိုင်းမှာတော့ ကလောနဲ့ သူ့အနီးနားဝန်းကျင်နေရာတွေက online မှာနာမည်ကြီးလာပီးသွားရောက်လည်ပတ်သူလည်းများလာပါတယ်။ ကလောရဲ့ main attraction တွေကတော့ trekking လုပ်လို့ကောင်းတာရယ် / အေးတဲ့ရာသီဥတုရယ် / ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်ဦးတွေပါ . ရှေးဟောင်းအိမ်တွေ ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တချို့အဆောက်ဦး တွေကတော့ ဟိုတယ်အနေနဲ့ ပြန်လည်တည်းခိုလို့ရနေပါတယ်။ အဲ့လို ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်ဦးပါရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက Grey house လို့ သိကြတဲ့ Royal Kalaw Hill Resort ရဲ့ hotel review လေးဖြစ်ပါတယ်။ ? တည်နေရာ location ဟိုတယ်တည်နေရာကတော့ ကလောဘူတာကျော် / အနောက်ဘက် ဘိုကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတည်ရှိတာပါ။ ဒေသခံတွေကို …
Read the full post →“Royal Kalaw Hill Resort or Grey House(Lodggy Hotel Review)”
burma, colonial building, hotel review, kalaw, shan shate, tips, vacationLeaveaComment on Royal Kalaw Hill Resort or Grey House(Lodggy Hotel Review)
March 25, 2019 cody kg	garden resort, Holidays, Hotel Reviews, inle, Myanmar, Shan State
“မိသားစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် တွေအတွက် မီးလှုံ ဖို့ bon fire လုပ်တဲ့နေရာလည်းပါဝင်ပါတယ်” အခုလို ချမ်းချမ်းစီးစီး ဆောင်းတွင်းလေးမှာ အင်းလေးကို သွားရောက်အပန်းဖြေအနားယူချင်သူတွေအတွက် Amata Garden Resort နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Garden Resort ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ပန်းဥယျာဉ်အကျယ်ကြီးရှိတဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ အခုမကြာသေးခင်က လည်း အခန်းသစ်တွေပါတဲ့ သုံးထပ်ဆောင် အဆောက်အုံသစ်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ? ဟိုတယ်အနေအထား Amata Garden Resort မှာ ဆိုရင် ဟိုတယ် အဆောင်ဟောင်းရယ်၊ Dec 2018 နှောင်းပိုင်းမှ စဖွင့်တဲ့ အဆောင်သစ်ရယ် ဆိုပြီး ၂ ခုရှိမယ်။ ဟိုတယ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ မြေဧကအကျယ်ကြီးမှာ လှပစွာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပန်းပင်တွေနဲ့ အတူခေတ်မှီဒီဇိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဟိုတယ်မှ ရေကူးကန်ကလည်း ၂ ကန်.. အင်းလေးကန်ကိုမေးတင်ဆောက်ထားတဲ့ရေကူးကန်ရယ်.. …
Read the full post →“AMATA GARDEN RESORT REVIEW (INLE)”
hotel review, inle lake, myanmar, resort, shan shate, spa, summer, swimming pool, Travel, vacationLeaveaComment on AMATA GARDEN RESORT REVIEW (INLE)
February 20, 2018 Kaung Tun	Hotel Reviews, Kalaw, Myanmar, pool
Pine Hill Resort Review ( Kalaw ) ဆောင်းရာသီ ကတော့ တောင်ပေါ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ မေမြို့ ၊ တောင်ကြီး ၊ ကလော သွားရောက်အပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပေါ့ .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရာသီဥတုက အေးတယ် ၊သာယာတယ်..ပြီးတော့ ချယ်ရီပန်းပွင့်တဲ့ အချိန်..အသီးဆိုလည်း စတော်ဘယ်ရီတို့၊ထောပတ်သီး တို့ ရတာဆိုတော့ အချိန်ခါကောင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် ကတော့ ကလော ဘက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ကလော ကလည်း အရင်ကတော့ တောင်ကြီးနဲ့ မြေပြန့်ကို ကူးလူးနေတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ၊ ခရီးသွားယာဉ်တွေ လမ်းတထောက်နားတဲ့ တောင်စခန်းမြို့လေး ကနေအခုတော့ ဆောင်းရာသီ အပန်းဖြေစရာ Resort မြို့ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဟိုတယ် တွေလည်း တောင်ပေါ်တွေမှာရော …
Read the full post →“PINE HILL RESORT AT KALAW:SCENIC MOUNTAIN VIEWS”
hilly region, hotel, kalaw, myanmar, pine hill, resort, review
July 7, 2017 Aung Toe	English, Recommendation, Shan State
As we all know, Monsoon in Myanmar receivesalot of rain and its soggy and wet. But still, there are many places left which you won’t seealot of rain. For those who are traveling in rainy season, Kalaw, Shan Shate is one of the best places to travel in rainy season. Why …
Read the full post →“Kalaw Monsoon”
adventure trekking, burma, kalaw, myanmar, recommendation, Travel, trekkingLeaveaComment on Kalaw Monsoon
April 4, 2017 Aung Toe	English, Nyaung Shwe, Travel Tuesday
What should we do while we are at Inle Lake? Here are the cultural things to do and see in Inle Lake.
burma, inle lake, myanmar, TravelLeaveaComment on Things to Do in Inle Lake
5 Hill Stations to escape the Heat
March 21, 2017 Aung Toe	Chin State, English, Kalaw, Nyaung Shwe, Shan State, Travel Tuesday
Take you pick of East or West for your hill stations to escape the extreme heat that hits Myanmar in April and May.
burma, chin, chin state, colonial building, hiking, inle lake, kalaw, may myo, myanmar, pyin oo lwin, rid dil, rid lake, shan shate, Travel, trekkingLeaveaComment on5Hill Stations to escape the Heat